January 2008 ~ စန္ဒကူး
မနေ့က အိမ်နဲ့သိပ်မဝေးတဲ့နေရာကဈေးလေးကိုရောက်တော့.. စည်ကားလိုက်တာ.. သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ ပွဲတော်ရောက်တော့မယ်... လမ်းဘေးကျပန်းဈေးသည်တွေ..ပစ္စည်းတွေစုံနေတာဘဲ။ ဟိုငေးဒီငေးလျှေက်ရင်း ကျောက်ကျောလုပ်အုံးမယ်ဆိုပြီး အုန်းသီးဝယ် လာခဲ့တယ်။ ဌက်ပျောဖူး၊ ဗူးသီးနုနု တစ်လုံး လဲပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ငရုတ်သီးခြောက်၊ ကြက်သွန်ဖြူနီ. ကို ပုဇွန်ခြောက်လေးနဲ့ရောထောင်း.. ပြီးတော့ ဗူးသီးဟင်းစပ်စပ်တစ်အိုးချက်လိုက်တယ်။ရေခဲသေတ္တာထဲမှာဘာရှိလဲလျှောက်မွှေရင်းနဲ့ ခရမ်းသီးနှစ်လုံးတွေ့ တာနဲ့ ပြုပ်ထားပြီး အလုံးလိုက်အခွံနွှာ၊ ပြီး ဘိုက်ခွဲ..ခက်ရင်းနဲ့ခြစ်၊ ကြက်ဥကို မဆလာ၊ ဆား၊ ငံပြာရည်၊ အချိုမှုန့် နဲ့ ခေါက်ထားပြီး ခုနခရမ်းသီးကို နှစ်ပြီး ဆီနည်းနည်းနဲ့ အိုးကပ်ကြော်...လိုက်တော့ ညစာအဆင်သင့် ဖြစ်ရော.. ပဲပင်ပေါက် အချဉ်စိမ်ထားတာနဲ့တွဲစားလိုက်တော့ ကောင်းမှကောင်းး ကဲစားပြီးပီဆိုတော့ ကျောက်ကျောကြိုဖို့ စရတော့တယ်...
ပထမဆုံး အုန်းသီးကို အုန်းနို့ညှစ်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နို့ (နွားနို့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရှိရင် ပိုကောင်း မယ်) Anchor Fresh Milk ဗူးကြီးတစ်ဝက်နဲ့အုန်းနို့နဲ့ရောပြီးကြိုလိုက်တယ်။သကြားနဲ့ ကျောက်ကျောမှုန့်ကို သမအောင်မွှေထားတယ်။ ပြီးတာနဲ့ အုန်းနို့အိုးကို မွှေရင်း နဲ့ အုန်းနို့ပွက်ပွက်ဆူပြီးလောက်တဲ့အခါ သကြား ကျောက်ကျောမှုန့် ကို ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဖျော်.. စကာနဲ့ စစ်ပြီး အုန်းနို့ အိုးထဲလောင်းထည့်ပြီး မီးအေးအေးနဲ့ မိနစ် (၂၀) လောက်မှန်မှန် မွှေပြီး... အအေးခံမယ့် ဗန်းထဲ လောင်းထည့် ခဏလောက်အအေးခံပြီး..မျက်နှာပြင်နဲနဲ မာလာတာနဲ့အုန်းသီးခြစ်ပြီးသားအဖတ်တွေကိုသကြားနဲ့မွှေပြီး မျက်နှာပြင် အနှံ့ ခပ်ပါးပါးလေးဖြူးလိုက်တယ်။ ဒီနေ့မနက်ရောက်တော့ ကျောက်ကျော/ ဂျယ်လီ ရပြီပေါ့.. ဂျယ်လီမှုန့်ထည့်တာ ချိန်ပြီးမထည့်လို့လားမသိဘူး.. ကျောက်ကျောကအရမ်းပျော့နေလို့ မနဲထိမ်းပြီးဖြတ်ယူရတယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 3:23 AM
မနှစ်ဒီဇင်ဘာအိမ်ကိုပြန်တုံးက..အိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန် အိမ်ကခွေးမလေးက ခွေးလေးတစ်ကောင်မွေးတယ်။ အိမ်မှာခွေး (၅) ကောင်ရှိတယ်။ အထီး (၂) ကောင် အမ (၃) ကောင်။ ခွေးတွေများလွန်းလို့ ပါးပါးနဲ့မာမီကိုပြောတယ် သူများကိုပေးပစ်လိုက်ပါလို့။ ဒါပေမယ့် မွေးကင်းစကတည်းက ကြီးတဲ့အထိ သံယောဇဉ်ကခက်သား.. နောက်ဆုံးမွေးတဲ့ခွေးလေးကို မောင်လေးက ပူးပူး လို့နာမည်ပေးတယ်။ သူ့အမေနာမည်က ပုလု။ မွေးကတည်းက မျက်ကွင်း နှစ်ဖက်ဘဲ ငတက်ပြားလိုမဲနေလို့ အဝေးမှာနေတဲ့ညီမလေးက ကြီးလာရင်သူခိုးဖြစ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုပြီး လာလာခေါင်းစားနေလို့ ခိုးချင်လဲခိုးပါစေ.လို့.. တစ်မိသားစုလုံးခွေးချစ်ကြတယ်။ မှတ်မိသေးတယ်။ ၂၀၀၁ခုနှစ်ကပြင်ဦးလွင်ကိုရောက်တုန်း..ပါးပါးက စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ရထားသံလမ်းဘေးက ခွေးလေးတစ်ကောင် ကို ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့ထည့်ပြီး ယူလာတယ်။ အဲဒီခွေးလေးက ချင်းခွေး (စစ်တပ်အခေါ်) ဆိုပြီး ရထားနဲ့ ရန်ကုန်ထိခိုးသယ်လာတယ်။ ကြီးလာတော့ လဲ လမ်းဘေးကခွေးတွေလိုပါဘဲ.. အထူးရှယ်ခွေးတော့ဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ချစ်ရတာဘဲ..သံယောဇဉ်ဆိုတာ လူလူချင်းမပြောနဲ့.. အရာဝတ္တုပေါ်မှာရော.. တရိစ္ဆာန်လေးတွေ ပေါမှာရော ထားတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား... နုနယ်တဲ့နှလုံးသားအရာရာကို တွယ်တာနေတာ..တစ်နေ့ကိုယ့် ကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ခွာသွားရင် ခံစားလိုက်ရတာနင့်နေတာပါဘဲ... ခုလဲ ထပ်တိုးလာပြီ.. ပူးပူး လေးတဲ့။
Posted by စန္ဒကူး at 2:56 AM
ချစ်သူ...မင်းသာငါ့အိမ်မက်ထဲမှာ အမြဲရှိနေမယ်ဆိုရင် ငါတစ်သက်လုံးမနိုးထပါရစေနဲ့..
Posted by စန္ဒကူး at 2:39 AM
လွမ်းတယ်..ဆွေးတယ် ဆိုတာ ပါးစပ်ကပြောမထွက်အောင်ကို..ဖြစ်နေပါပြီး...
တစ်နေ့တော့ ဆုံမှာပါဆိုတဲ့အသိနဲ့.. ခံစားချက်တွေကိုဥပက္ခာပြုပြီးဟန်ဆောင်နေရတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရွံမုန်းလာတယ်..
ဘုရားသခင်..ကျွန်မ ကိုကျောက်သားလိုမာကျောတဲ့အသည်းနှလုံးတစ်ခုပေးပါ.. ခံစားမှုမရှိတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံကိုပေးပါ...
Posted by စန္ဒကူး at 2:12 AM
ငယ်ငယ်ထဲက အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။ ဘုရားကျောင်းမှာသီချင်းဆိုရင် မာမီက (၅)ကျပ်ပေးတယ်။ ကျောင်းမှာ အဆင့်(၁)ရရင် ဂါဝန်ဝယ်ပေးတယ်။ အတန်းနဲနဲကြီးတော့ အဆင့်(၁)ရရင် နွေကျောင်းပိတ်မှာ ပြင်ဦးလွင် သွားခွင့်ရမယ်။ ပြင်ဦးလွင်မှာ ပါးပါးရဲ့ အမအကြီးဆုံး နေတယ်။ ကြီးကြီးပေါ့။ သူ့မှာ သားတစ်ယောက်ဘဲရှိတယ်။ အဲဒါကျွန်မအကို။ သူ့နာမည် ကျော်ကျော်။ သူ့ကိုအရမ်းချစ်တယ်။ သူနဲ့ ဆော့ရတာလဲပျော်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒါ ကျွန်မအတွက်မျှော်လင့်ချက်..ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘာကိုမှ မက်မက်မောမော တပ်မက်တာမရှိပေမယ့် အဲလို အပျော်လေးတွေကိုတော့ မျှော်လင့်ပြီး ရအောင်လုပ်တတ်တယ်။
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မချစ်သူနဲ့ကျွန်မက တစ်နေရာစီမှာ.. ရုံးပိတ်ရက်ကို အမြဲမျှော်တယ်.. ရုံးပိတ်ရက်ရောက်ရင် ချစ်သူကမလာနိုင်ရင်တောင် အွန်လိုင်းမှာတွေ့ဖို့အချိန်ပိုပေးလို့ရတယ်လေ..
အခုလဲ နှစ်သစ်ကူးရောက်တော့မယ်။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပေါ့.. ကျွန်မရှိတဲ့နိုင်ငံကတော့ ခရစ်ယာန်နိုင်ငံဆိုတော့ ရုံးပိတ်ရက်မရှိဘူး..ဒါပေမယ့် ချစ်သူရှိတဲ့နေရာမှာတော့ ရုံးပိတ်မယ်ထင်တာဘဲ..
လာမယ်။ မလာဘူး ဆိုတာစိတ်ကူးထဲမှာ ရူးနေတဲ့အဖြစ်..ဒါပေမယ့် မျော်လင့်နေတာတော့အမှန်ဘဲ...
အောက်တိုဘာလ ဖွားတဲ့သူတွေက စိတ်ဓာတ်အတက်/အကျလွယ်တယ်လို့ စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်။ ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်... မဖြစ်နိုင်မှန်းသိရက်နဲ့ ကိုယ့်ဘာကိုယ်ကိုယ်တစ်ဖက်သက်မျော်..ပြီး တော့ လဲ ဒီတိုင်းက ဒီတိုင်းဘဲ..ရူးတယ်လို့ဘဲပြောပြော..ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှိပ်စက်တယ်ဘဲပြောပြော..ကျွန်မလဲ လူသားတစ်ဦးပေမို့..ဆန္ဒတော့ရှိတာပေါ့... ချစ်သူကိုတွေ့ချင်တယ်၊ စကားပြောချင်တယ်.....
ဒါပေမယ့်အားလုံးကနောက်ဆုံးတော့ စိတ်ကူးနဲ့ရူးတဲ့ဇတ်လမ်းအဆုံး လို့ပြောရမလားဘဲ...
ဆိုတော့..ကျွန်မကို တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ဆိုတာ လာမပြောနဲ့..ဘာမှမထူးတဲ့နှစ်ကုး ဆိုရင်တော့လက်ခံမယ်...
Posted by စန္ဒကူး at 1:55 PM
ကျွန်မချစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုကိုင်ကြည့်နေတုန်းသူ့မျက်နှာပေါမှာဝက်ခြံလိုအဖုလေးတစ်ခုတွေ့လို့လိုက်စမ်း တော့ ..သူကရီပြီး.ကြည့်နေတယ်။
သူ့ကိုအိပ်မက်ထဲမှာတွေ့တဲ့ညတွေဆိုနောက်နေ့နိုးလာရင်လဲမထချင်တော့ဘူး..သူ့အကြောင်းဘဲစဉ်းစား ချင်တယ်။ ခက်သားလားနော်.. ကျွန်မအသက်လဲမငယ်တော့ပါဘူး. ပြောရမယ်ဆိုရင်အပျိုဟိုင်းအရွယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်..ဘာလို့များဒီလိုစိတ်လှုတ်ရှားမိမှန်းမသိဘူး..အချစ်ကြောင့်ဘဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..